Antonio Gutters: waxaan Somalia u soo magacaabaynaa wakiil badala Mr.Haysom • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Antonio Gutters: waxaan Somalia u soo magacaabaynaa wakiil badala Mr.Haysom
Antonio Gutters: waxaan Somalia u soo magacaabaynaa wakiil badala Mr.Haysom
January 5, 2019 - By: Hanad Askar
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Gutters, ayaa sheegay in uu Soomaliya u soo magacaabi doono Ergay cusub oo badala Nicholas Haysom, oo Dowladda Federaalka Soomaliya ay ku amaray in dalka aanu ka shaqeyn karin iskagana baxo.
War qoraal ah oo ka soo baxay Qaramada Midoobay oo uu ku saxiixnaa Ku xigeenka Afhayeenka Qaramada Midoobay Farxaan Xaq ayaa lagu sheegay in xoghayaha guud Mr. Gutters uu haatan qorsheynayo in Soomaliya uu u soo magacaabo ergay cusub.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in uu kalsooni buuxda ku qabo danjiraha ay eriday dowladda Soomaaliya kuna tilmaamay in uu yahay Shaqaale caalami ah oo khibrad badan leh.
“In wakiilada Qaramada Midoobay la soo eryo waa mid xushmad daro ku ah QM islamarkaana aan waafaqsanayn heshiiskii Vienna ee 1961-dii,” ayuu yiri Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Gutters.
Mr Gutters Waxaa uu tilmaamay in Qaramada Midoobay ay ka go’antahay inay sii waddo dadaallada lagu doonayo inay Soomaaliya ku noqoto dal nabdoon oo la jaanqaada dunida inteeda kale.
Hadalka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa kusoo aadaya xili Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si weyn uga biyo diiday in uu ka laabto go’aankii ay dalka uga eryeen Nicholas Haysom kadib wahadal dhanka taleefanka ah oo dhex maray isaga iyo xoghayahe Gutters.
Dhawaan ayay ahayd markii wasaarada arimaha dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay soo saartay warsaxaafadeed lagu sheegayo in danjire Haysom aan dalka laga rabin isla markaana uu iskaga baxo taas oo ka dhignayd in ergaygan gabi ahaan laga eryay dalka
Horseed Media 2018